/Blog/Gallery/Powder Synephrine HCL - Famonoana menaka sy famenon-danja
Posted on 11 / 25 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
1. Synephrine H Over Overview
Ankehitriny, ny isan-jaton'ny isan-jaton'ny mponina dia mitady safidy hitazonana ny lanjany mahasalama. Eny, eo amin'izy rehetra dia ny fampiasana ny Synephrine HCL poids dia iray amin'ireo fomba azo antoka indrindra ahafahanao mitazona tavy tsy mahasalama. Ny vovoka Synephrine dia fitambarana simika alkaloid izay tsy fahita firy. Izy io dia singa voajanahary hita amin'ny zavamaniry toy ny voasary mangidy, ankoatry ny hafa.
Io no akora bioaktika voalohany amin'ny volomboasary mangidy izay efa nanomboka tamin'ny 1500s ny fampiasana azy. Ka inona marina no nampiasana azy? Taloha, ity supplement magical ity dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana ny olana gastrointestinal toy ny constipation, indigestion, ary mual. Amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao dia fantatra koa fa mahomby anticonvulsant ary koa fanafody ho an'ny torimaso sy ny tsy fahasalamana.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny teknolojia, ny voasary maintso dia voaporofo fa ilaina kokoa amin'ny fitsaboana ny fahasahiranana maoderina kokoa noho ny areti-mifindra sy ny bakteria, ny alika ary ny kibo. Amin'ny fahatsiarovana fa ny singa voalohany amin'ny voasary maintso dia ny Synephrine HCL, manome anao ny antony maha izy azy io fa misy ireo toetra manasitrana be dia be.
Ny firafitry ny molekiola Synephrine dia mitovy amin'ny an'ny ephedrine, izay iray amin'ireo singa mandoro tavy lehibe indrindra. Na izany aza, Ephedrine tsy eo an-tsena intsony ho famenon-tsakafo; noho izany, Synephrine no solony tsara indrindra. Ny Octamine dia metabolite an'ny Synephrine ary nanjary malaza noho ny fananany mandoro tavy.
2. Synephrine HCL- Mekanitra asa
Miasa ny Synephrine amin'ny alàlan'ny fanovana ny famokarana angovo eo amin'ny vatana. Manao izany amin'ny alàlan'ny fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny atiny, izay mitarika amin'ny famoronana anzima maro ary izy koa dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanarahana ny fandevonan-kanina sy ny famokarana angovo ao amin'ny vatana. Ny fikarohana natao dia naneho fa Synephrine HCL (5985-28-4);
Mampirona glucosidase sy amylase, izay angovo izay tompon'andraikitra amin'ny fandevonan-kanina. Noho izany, tsy azo inoana fa hisy fisotroan-dronono ao am-pisakafoanana.
Mampitombo ny fidiran'ny glucose amin'ny hozatra amin'ny alàlan'ny fanentanana ny AMPK. Izany no enzyme izay ny fatrany dia ny mahatsapa ny haavon'ny solika ao amin'ny sela ary koa manentana ny fandoroana ny tavy. Ankoatr'izay, dia mampiakatra ny fandraisana ny siramamy ao amin'ny sela izany.
Synephrine dia mampitombo ny haben'ny ATP azo ampiasaina. Izany dia manome angovo ilaina kokoa hanampiana ny fanehoan-kevitra simika ao amin'ny atiny.
Izy io dia misakana ny fiovan'ny siramamy ho tavy.
Mampitombo ny fihanaky ny glucose ary glycogen izany.
Synephrine dia mpanentana malemy ho an'ny adrenoreceptors alpha-1 sy alpha-2. Izy roa dia miasa amin'ny valin'ny adrenaline ka mampitombo ny tosidran'ny olona sy ny tahan'ny fo. Noho izany, Synephrine 5985-28-4 dia mety tsy hampitombo ny tahan'ny fitempon'ny fonao na ny tosidranao.
Izany no fahasamihafana lehibe eo amin'ny ephedrine sy Synephrine 5985-28-4, satria ny ephedrine dia fantatra fa mampihetsika ny alpha-1 sy ny alpha-2 adrenoreceptors mafy.
Synephrine HCL koa dia mandrisika ireo mpandray ny neuromedin U2. Ireo dia molekiola hita ao amin'ny hypothalamus ary mampitombo ny fifohazana.
Ny Synephrine dia miasa amin'ny fampijanonana ny famokarana eotaxin-1. Izany no molekiola mihetsika ny eosinofila hifindra any amin'ny faritra mirehitra. Izy io koa dia manakana ny hetsika NADPH oxidase, izay novokarin'ny neutrofil ary avy eo, dia miteraka karazana oksizenina mihetsika maro.
Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fampahavitrihana ny NF-kB, ny Synephrine dia mampihena ny fivontosana. Izany dia satria iankinan'ny NF-kB be loatra dia fantatra fa miteraka aretin-tsaina toy ny psoriasis, aretin'ny tsina miteraka ary koa ny asma.
Ny vokany hafa
Ny Synephrine dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo enzim-piraika butyrylcholinesterase sy acetylcholinesterase, izay manimba ny marary Alzheimer.
3. Fampiasana ny Synephrine HCL
(1) Synephrine HCL ho an'ny fihenan-danja
Synephrine dia dipoavatra izay miasa amin'ny fomba maro.
amin'ny maha- fanavakavahana- Ianao ve ilay karazana olona manaitra foana? Ny tiako holazaina dia na dia rehefa avy mihinana be aza ny vavony, tsy maharitra ela vao manomboka mitsoraka sy mangataka zavatra. Na dia mety te ho lanja aza ianao, ity dia iray amin'ireo fanamby mety atrehanao. Soa ihany, ity dipoavatra manakana ny hanoanana ary manainga ny hanintona, hahatonga anao hahatsiaro ho feno haingana kokoa.
Vokatr'izany, afaka mifikitra amin'ny sakafonao mahasalama araka ny efa nomanina ianao ary manary lanja bebe kokoa amin'ny lanja kokoa. Ary alohan'ny hitiavanao azy aza dia hitolagaga ianao fa ilay vatana bikini mangatsiatsiaka efa nofinofinao foana.
(2) Synephrine HCL ho Fat burn
Ny matavy be loatra dia tsy loza mitatao ihany, fa mety hahatonga anao ho ratsy tarehy ihany koa. Ny tavy mandoro dia misy tombony lehibe, anisan'izany ny hahavelomanao lava. Soa ihany, ny fampiasana Synephrine HCL dia iray amin'ireo paikady voaporofo azonao ampiasaina hampihenana ny tavy amin'ny vatana. Ity ny fomba hanampiany anao hahatratra an'ity tanjona ity;
Ampitomboy ny haavon'ny angovo mandritra ny fotoam-piasana
Tsy mila mankany amin'ny gym ianao ary mahatsapa ho reraka sy matory daholo; Nahazo anao i Synephrine. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny famahanana anao amin'ny angovo rehetra ilainao mba hanaovana fampihetseham-batana mpamono olona. Totozy ampiarahina amin'ny Synephrine powder tsikaritra fa afaka nilomano ela kokoa, izay mampiseho fa nitombo ny herin'ny angovo.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny haavon'ny angovo, Synephrine dia fantatra fa manatsara ny fahombiazan'ny atletisma ihany koa. Ny vokatra mitambatra amin'ny fampitomboana ny fandaniana angovo amin'ny tavy sy ny fanentanana dia mampiroborobo ny fahombiazana ary mampitombo ny habetsaky ny vokatra azo avy amin'ny fampiharana aerobika sy anaerobika. Izany no mahatonga azy io ho famenon-tena mialoha ny fampiofanana ary a Fanala tavy koa.
Ny fandinihana natao tamin'ny lehilahy roa ambin'ny folo dia naneho fa rehefa naka an'io famafazana lanjan'ny lanja io dia dimy amby efapolo minitra talohan'ny nampisondrotra ny lanjan'ny lanja farany. Nahavita nanao famerimberenana betsaka kokoa izy ireo raha oharina amin'ny placebo. Raha mitambatra amin'ny kafeina, ny Synephrine dia nampitombo ny famerenam-bokatra nateza indrindra tamin'ny loha-hevitra.
Ampitomboy ny lipolysis
Izany no dingan'ny famotehana ny tavy ao amin'ny vatana. Izy io dia faritana tsara kokoa ho metabolisma. Ny Synephrine dia miasa amin'ny fampitomboana ny tahan'ny metabolika, ka mahatonga azy io ho haingana kokoa. Manazava ny antony mahatonga ny Synephrine hahatonga anao handoro tavy bebe kokoa satria rehefa avo ny metabolisma dia mety hahatratra ny tavy voatahiry ny vatanao hahazoana bebe kokoa.
Ny fikarohana natao momba izany dia naneho fa amin'ny fatra 50mg iray, ny tahan'ny metabolika basal dia nitombo ny 65 kaloria nandritra ny dimy amby fitopolo minitra. Rehefa atambatra amin'ny alàlan'ny molekla hesperidin sy naringin, ny fitrandrahana metabolika dia tsikaritra fa nahatratra valo hetsy mahery. Ny kaloria betsaka toy izany dia nodorana tamin'ny jogorea roapolo minitra.
Ny Synephrine dia miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana ny fihenan'ny glucose amin'ny hozatry ny tenda. Manampy amin'ny fandoroana tavy izy amin'ny alàlan'ny fanesorana ny glucose be loatra amin'ny rafitra ra. Izy io koa dia manampy amin'ny fanomezana ny hozatra miaraka amin'ny glucose izay ampiasaina tsara ny angovo. Noho izany, ny glucose betsaka intramuscular dia midika tanjaka hozatra sy fatra lehibe kokoa.
Ny fatra Synephrine HCL dia miovaova arakaraka ny olona iray. Na izany aza, ny fatra mahazatra a dipoavatra dia 100mg isan'andro. Ny fikarohana kosa dia mampiseho fa ny fatra Synephrine HCL an'ny 35mg dia mandaitra ihany koa. The Fatra amin'ny Synephrine HCL tsy tokony hihoatra ny 200mg ao anatin'ny iray andro mba hisorohana ny poizina.
Raha sambany ianao vao maka izany, atombohy amin'ny dosage ambany amin'ny 10-20mg hamaritana ny fandeferanao. Raha tsy mijaly amin'ny voka-dratsy manimba ianao dia afaka mampitombo tsikelikely ny fatra. Aza ampitomboina ny adiny roa mandritra ny adiny roa na efatra mahery, satria mety hiharatsy amin'ny lafiny ratsy izany.
Ho an'ny fiantraikan'ny bodybuilding Synephrine na ho toy ny mpandoro tavy dia tokony ho azonao antoka fa alainao voalohany amin'ny maraina sy dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny telopolo minitra alohan'ny fampiharana. Ampirisihina hitondra izany amin'ny rano ianao.
Na dia mety aleon'ny olona sasany aza ny maka Synephrine irery, ny sasany kosa mety aleony manangona azy. Azonao atao ny mampiasa azy io miaraka amina vovoka mampihena lanja hafa ary koa ireo izay mampitombo ny herinao. Yohimbine mifatotra tsara amin'ny Synephrine, indrindra raha ny hampihena ny lanjanao no tena tanjonao.
L-theanine ihany koa safidy tsara satria manambatra azy tsara amin'ny manaitaitra rehetra. Ny fiasan'izy ireo dia ny fanalefahana ny fiantraikany sy mampitombo ny fiasan'ny kognitif. Ny hoditry ny volon'akoho fotsy dia azo ampidirina ao anaty fitoeram-bolany ihany koa.
Ny kafeina koa dia mampiditra fampidirana tsara, na amin'ny endriny tsy misy fotony na avy amin'ny loharano hafa toa ny fitrandrahana guarana.
5. Vidio ny Synephrine HCL amin'ny Internet
Tsy misy isalasalana, Synephrine HCL no masirasira masin'ny volo lanja. Manampy anao hanafoana ny fahazotoan-komanao izany raha mikendry ny hihinana kely ianao na hampihena ny fihinanana sakafo tsy mahasalama. Afaka manapa-kevitra ny hampihena ny fahazotoan-komana aza ianao Synephrine supplementes adiny efatra amby roapolo raha te hanana endrika haingana ianao.
Ary koa, arak'izay hita ao amin'ilay lahatsoratra dia manatanjaka anao, izay tena manampy, indrindra rehefa te-hiasa ianao ary mihinana kely. Raha ny mikasika ny fotoana itiavany azy dia tsy hino ianao fa ao anatin'ny telopolo minitra dia ho hahita ny vokatra ianao. Mety haharitra adiny roa eo ho eo izao fiatraikany izany satria roa ora ny Synephrine.
Raha ampiasaina miaraka amin'ny sakafo ara-dalàna sy fanatanjahan-tena dia ho hitanao ny fihenan'ny vatan'ny vatana sy ny fihenan-danja ao amin'ny Synephrine ao anatin'ny roa herinandro. Ho an'izay sahirana amin'ny fihinanana sakafo maivana, fihinanan-kanina, na izay mahatsapa fa te-hanala tavy amin'ny vatany izy ireo, izany no tena izy!
Ny ankamaroan'ny mpandoro tavy dia fantatra fa mahatonga anao hijaly amin'ny lafiny ratsy, saingy hino ve ianao fa ny Synephrine no manolotra an'izany rehetra izany nefa tsy atahorana hametaka ny vatanao? Ny ankamaroan'ny famerenan'i Synephrine dia mitatitra kely ihany amin'ny fiantraikany tsy misy dikany ary tsy mahagaga raha ny lazan'ny laza.
Tena tapa-kevitra ny hahatratra ny tanjon'ny lanjanao ianao izao, avy aiza no ahitanao ity mpandoro tavy ity? Raha betsaka ny orinasa mety mampanantena ny hanome anao Synephrine tsara indrindra, mila mitandrina ianao satria misy ny mivarotra vokatra sandoka aminao. Manome anao lanja ny volanao izahay amin'ny fanomezana anao fanafody fanampiny Synephrine izay azo antoka sy mandaitra. Raha vantany vao ianao mividy Synephrine avy aminay, matoky ianao fa handoro tavy ary ho very haingana sy maharitra mandrakizay.
Ny famenon-tsika mampihena ny lanjantsika dia tsy misy risika intsony satria voajanahary 100% tsy misy fanampiny miafina. Mandidia ny vovon-tsavoka 'fahagagana' avy aminay anio ary esory ny kilao tsy ilaina ary koa mankafy ny tombony azo avy amin'ny bodybuilding Synephrine.
The Health Professional's Guide to Diet Supplement, nataon'i Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, pejy 13
Fahatongavana: Epidemiology, Pathophysiology-ary fisorohana, Edisiona faharoa, namboarin'i Debasis Bagchi, Harry G. Preuss, pejy 538
Famenon-tsakafo ara-tsakafo ara-tsakafo amin'ny fanatanjahantena sy fanatanjahan-tena, nosoratan'i Mike Greenwood, Douglas Kalman, Jose Antonio, pejy 231
Fampidirana feno momba ny "Killer cancer mamono" Gefitinib
Ahoana ny fiasan'ny Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ho an'ny mpamorona vatana Ahoana no fiasan'ny Orlistat ho toy ny fatiantoka lanja?